Xildhibaan Ilhan Cumar oo taagero buuxda siisay Musharax Mohamud Noor -
Waxaa magaalada Minneapolis ee gobalka Minnesota dalka Maraykanka maanta ka dhacday munaasabad ay xildhibaan Ilhaan Cumar ay taageeradeeda ugu muujisay musharax Maxamuud Nuur oo isagu u tartamaya maamulka goloha deegaanka degmadda 6aad ee magaalada Minneapolis.
Isu soo bax balaaran oo lagu taageerayo Musharax Maxamuud Nuur ayaa ka dhacay xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Cedar, gaar ahaan xarunta Brian Coyle.
Haddaba Ilhan Cumar ayaa kalsoonidii musharraxnimo maanta si rasmi ah u siisay musharax Maxamuud Nuur. Ilhan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah ayaa sannadkii hore noqotay gabadhii ugu horreysay oo Muslim, muhaajir Mareykan ah oo noqota xildhibaan.
Musharax Maxamuud Nuur ayaa isagu maalmahan helayey dad badan oo siyaasiyiin ah oo taageero buuxda la garab istaagay ololihiisa doorasho. Todobaadkii hore ayaa Duqa magaalada Minneapolis ee Betsy Hodges ay taageero buuxda siisay Maxamuud Nuur.
Xildhibaan Ilhan Cumar ayaa tiri, “Sababta aan ku taageeray Maxamuud Nuur ayaa ah, in Maxamuud uu yahay qof mas’uuliyadan iyo xilkan ka soo bixi kara. In uu Maxamuud yahay musharax lex xirfad, waayo arragnimo iyo kalsooni buuxda oo uu ka haysto dad weynaha uu matalayo, kana shaqaynaya midnimadda dadka iyo danta guud ee degmadda 6aad”.
Ilhan Cumar oo qudabadeeda sii wadata ayaa sheegtay in dad weynaha deggen degmadda 6aad ay dadaaleen, balse qofkii ay horay u doorteen uu gabay hawshii iyo xilkii loo doortay, haddana loo baahan yahay in ay doortaan hogaamiy dhab ah oo iyaga danahooda hadh iyo habeen u taagan.
Musharax Maxamuud Nuur ayaa isagu u mahadceliyey Ilhan Cumar taageerada buuxda ee ay siisay iyo waliba hogaanka wanaagsan ee ay bulshadda u hayso. Maxamuud Nuur ayaa dadweynihii usoo baxay u sheegay in xilka iyo kursiga uu u tartamayo ay tahay mas’uuliyad amaano ah, wuxuuna balan qaaday in amaanaddaas sida saxda ah uga soo baxayo haddii aad codkiina igu taageertaan.
Maxamuud Nuur ayaa ayaa yiri, “Maalin walba waxaa xafiiska ha’yadda aan maamulo adeeg u soo doonta in badan oo idinka mid ah, waan ogahay, xog ogaalna waan u ahay baahida xaafadan ka ka jirta iyo dhibaatooyinka bulshadeena haysata. Waxaanan diyaar u ahay in aan wax ka qabto, in aan dhallinyarada caawiyo, in aan waxbarahadda carruurteena ku dadaalo sidii lagu hormarin lahaa”.
Cismaan Axmed oo kamid ahaa dadkii qudbada ka jeediyay meesha ayaa dadweynihii goobta xaadirka ku ahaa ku dhiirigeliyay in ay codkooda ku taageeraan musharax Maxamuud Nuur. Cismaan ayaa yiri, “Shalay anaga ayaa dooranay Cabdi Warsame, maantana kalsoonidii ayaan kala noqonay, xaafadan waxay u baahan tahay hogaamiye wax u u qabta, balse uma baahna, qof kala qaybiya dadka, qabyaaladna ku kala fogeeya”.
Dadkii kale ee munaasabada ka hadlay waxaa kamid ahaa musharax C/Kadir Hassan oo loo yaqaano (AK), Haween kamid ad ah hooyooyinka degen degmadda 6aad iyo qaar kamid ah oday dhaqameedyaddo ka kala socday Soomaalida iyo Oromadda.
Haddaba waxaa si xowli leh u socda doorashadda iyo loolanka loogu jiro kuraas badan oo uu kursiga degamadda 6aad ee magaalada Minneapolis kamid yahay. Maalintii Jimcaha ee bisha September ahayd 9/22/2017 ayaa waxaa biloowday cod bixinta, waxaana ilaa iyo hadda xarunta lagu codeeyo ku sii qulqulaya dadweyne Soomaali u badan oo iyagu codkooda dhiibanaya. Maalinta sida tooska ah loo codeynayo ayaa ah November, 07, 2017.
Related Items:Featured, Xildhibaan Ilhan Omar